Rood Synephrine HCL budada (5985-28-4) hplc = 98% | Lacagta Fatahaada AASraw
/ Products / Xabbad dufan leh / Synephrine HCL budada
Rating: SKU: 5985-28-4. Category: Xabbad dufan leh
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saarka iyo awooda wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada Synephrine HCL (5985-28-4), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Synephrine budada HCL waa dabiici ah kiimikada kiimikada ee alkaloid oo laga helo dhirta oo laga soo saaro si loogu isticmaalo dhamaystirka. Orange roodhidu waa dhirta loo yaqaan 'synephrine' ugu caansan waxayna leedahay taariikh taariikheed oo gaar ah. In kastoo casaan aad u qallafsan uu leeyahay awood ballaaran oo suurtagal ah, synephrine waxaa sida ugu horreysa loo isticmaalay loona bartay waxtarka miisaanka iyo luminta.
Daawada budada loo yaqaan "HBL"
Synephrine hydrochloride Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Qalabka xayawaanka ah ee loo yaqaan "hydrochloride"
Qaaciddada Molecular: C9H14ClNO2
Miisaanka kelli: 203.67
Dhibcaha Biyaha: 147-150 ° C
Color: budo crystal White
Dib-u-eegis (CAS 5985-28-4) Dib-u-eegid
Dhegayso, ma tahay wax aad u xun oo ku saabsan cuntooyinka qashinka ah ee kaa horjoogsanaya in aad qaadatid shaxdan saacad ee aad ku qanacsaneyd? Mid ka mid ah waxyaabaha la sameeyo si aad u hesho sawir macquul ah waa inaad xakameyso rabitaanka cuntadaada. Marka aad sidaas samayso, waxaad ku guuleysan doontaa badhka dagaalka. Waxaa jira daroogo badan oo suuqa ka jira oo loo sameeyay si loo yareeyo cuntada. Syneprine waa mid ka mid ah daroogooyinkaas. Arrintan Dib-u-eegista Synephrine, waxaad ka heli doontaa macluumaad wax ku oolsan oo ku saabsan daawadan oo noqotay mid caan ah marka ay timaado maareynta miisaanka.
Waa maxay qolofta
Synephrine waa kiciye xoog leh oo leh hanti-gubasho iyo rabitaanka cuntada-xakamaynta. Waxay sidoo kale ka caawisaa jirkaaga inuu taageero taakuleyn wanaagsan. Noocyadaas waxay sameeyaan Synephrine si aad ah faa'iido u leh dadka cayilan iyo cayilsan oo ku dadaalaya inay yareeyaan cunto yaryar oo lumiyaan miisaanka. Waxaa caadi ahaan lagu iibiyaa qaab milix ah oo loo yaqaan 'salt' Synephrine HCL.
Synephrine waxaa badanaa laga helaa noocyo kala duwan oo citrus ah. In kastoo ay joogaan noocyo caano ah oo qafiif ah oo qadhaadh ah, waxay ka sii badan yihiin noocyo qadhaadh ah. Hal sahan oo ku lug leh wax ka badan 50 mashiinka la isku qurxiyo iyo iibinta ganacsi ahaan loo diyaariyey, maadada cephrine (CAS 5985-28-4) ayaa laga helay 4-60 mg / L.
Qalabka kiimikada ee koodhka
Daawada MAGACA MAS'UULIYADA XANUUN
LAYLI FORMULA MOLECULAR
Dhibicda Biyaha 162 ilaa 164 ° C (324 ilaa 327 ° F
Mashruuca Waxqabadka ee Synephrine
P-synephrine waxay dabiiciyan ku dhacdaa jidhka bini'aadamka, waxaana caadi ahaan la gartaa enzymes ee maskaxda loo yaqaanno Monoamine oxidase enzymes. Enzymes waa kuwa isku midka ah ee xakameynaya heerarka dopamin, serotonin, iyo norepinephrine.
Synephrine waxaa la rumeysan yahay inay saameyn ku yeelanayso habka adrenal ee jirka bini'aadamka iyo kor u qaadista heerka dheef-shiid kiimikaadka, kaas oo ka dhigaya ilaa 70 boqolkiiba kharashaadka kaloriciga maalinlaha ah. Sida laga soo xigtay daraasaddan, maaddadani waxay ka caawineysaa in ay kor u qaaddo dheef-shiid kiimikaad, taas oo keeneysa in loola jeedo fatahaada iyo maareynta miisaanka.
Synephrine ayaa si lamid ah u la mid ah pseudoephedrine iyo eefedrine, kuwaas oo ah xeryahooda laga helo noocyada kala duwan ee alerjiyo-ka-soo-saarka / daawooyinka qabowga, tamarta tamarta, iyo miisaanka luminta luminta. Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan synephrine waa in ay si wax ku ool ah u kordhiso heerka dheef-shiid kiimikaadka jirka iyada oo aan muujin wax saameyn ah ku ah dhiigga iyo garaaca wadnaha. Sababtaas awgeed, waxaa si weyn loo tixgeliyaa inuu yahay midka ugu fiican efedrine.
Synephrine waxay leedahay taariikh dheer, waxaana loo isticmaalay sidii xarun caafimaad oo ku baahsan Bariga Afrika iyo kulaylaha Aasiyaasha boqolaal sanadood. Muddo dheer ayaa loo isticmaalay daaweyn loogu talagalay caloosha, caloosha, lallabbo, iyo qalafsanaan.
Maanta, Synephrine waxaa inta badan loo isticmaalaa saameynta kicinta. Waxay ku dhex jirtaa kiimikada maskaxda waxayna kicineysaa dheef-shiid kiimikaadka ka caawiya xakamaynta cuntada, gaar ahaan carbohydrateska. Markaad qaadato miisaan lumis ah oo ay ku jiraan synephrine, waxaad dareemeysaa dareemid aadna cuni doontaa, sidaa darteedna maareyn miisaanka caafimaadka leh.
Qaabka kale ee synephrine uu fududeeyo miisaanka lumitaanka waa in ay kicinaysaa heerkul-maskaxeed oo kor u qaadeysa jirkaaga si aad u gubto dufanka aan loo baahneyn. Marka laga reebo fududeynta gubista dufanka xad-dhaafka ah, dheeraadka ah ayaa sidoo kale ka hortagaya kaydinta dheeraad ah ee jirka. Adiga oo isticmaalaya waxyaabaha dheeraadka ah ee ku jira waxyaabahan dabiiciga ah si joogto ah, waxaad awoodi doontaa in aad lumiso dufin degdeg ah.
Daraasaduhu waxay sameeyeen isku-xir u dhexeeya cayilka iyo niyad-jabka. Marka laga soo tago caawinta dadka cayilan iyo cayilka, miisaanka ayaa lumaya miisaanka, synephrine ayaa lagu ogaadey inuu yahay dhiirrigelin niyadda. Tani waxay ka dhigeysaa waxtar dheeraad ah dadka qaba diiqada, niyad-jabka, ama dhibaatooyinka kale ee culus.
Synephrine (CAS 5985-28-4) Qiyaasta
Dadka badankood, qiyaasta daawada 10-20 ayaa la qaadaa saddex jeer maalintii. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta millatariga 50 (inkastoo aan saddex goor maalintiiba) ayaa lagu talin karaa dadka qaarkood.
Hal daraasad, hal qiyaas oo ah 50 milligram oo synephrine ah ayaa lagu ogaadey inay xoojiso heerka dheef-shiid kiimikaadka asaasiga ah ee 65 kalooriyeyaasha. Kahor isticmaalka synephrine, waxaa fiican inaad kala tashato dhakhtarkaaga qiyaasta adiga kuu shaqeyn doonta.
Sida wax badan oo dheeri ah, ma ogaaneysid wax badan markaad bilowdo isticmaalka synephrine. Natiijooyinka ugu fiican waxaa la arki karaa oo keliya ka dib isticmaalka joogtada ah. Dadka intooda ugu badan waxay soo sheegaan koror yar oo tamar la'aan ah iyada oo aan mid ka mid ah saameynada guud ee la xidhiidha kiciyeyaasha, sida wadna garaacida, lallabbo, jitters, iwm.
Taxaddarrada Markaad qaadaneysid Synephrine
Ha ka qaadin wax ka badan qiyaasta maalin walba loo qoondeeyey: Si degdeg ah si aad u hesho natiijo degdeg ah, waxaa laga yaabaa inaad jiidato inaad isticmaasho synephrine ka badan inta lagu talinayo. Isticmaalidda maqefrineinka ka badan intii la koreeyey waxay halis u yihiin dhibaatooyinka soo raaca sida madax xanuun iyo dawakh.
Ha isku darin synephrine leh kiciyaasha kale: Synephrine waa kicin aad u awood badan, sidaas awgeed iyada oo la isku daraysa kiciyeyaasha kale waxay kicin kartaa waxyeelo halis ah. Iyadoo lala isticmaalayo qaybaha kale sida PEA ama eefedrine waxay kicin kartaa halista caafimaadka sida suuxinta, xirmidda wadnaha, iyo dhiig kar.
Ha qaadin cinwaankaaga haddii aad leedahay xaalad caafimaad oo hoose: Haddii aad qabtid dhiig karka, HIV / AIDS ama cudurada kale ee halista ah, waxa ugu wanaagsan in laga fogaado qaadashada synephrine. Tani waa sababta oo ah xoojinta ayaa laga yaabaa inay isdhex gasho iyo / ama isdhexgalaan daawooyinka aad qaadan kartid si aad u daaweyso / xakameyso xaaladaada.
Iyadoo ay sabab u tahay dhibaatooyinka soo noqnoqda ee ka imanaya isku-dhafka synephrine (5985-28-4) iyo xeryahooda kale, waxa ugu wanaagsan in la iibsado qaabka ugu fudud ee Synephrine ee la heli karo. Iska ilaali ganacsatada isticmaala wax fillers ama isku-dhafka synephrine leh cunaha sida ephedrine ama kafeyn.
Waxa la Yidhaahdo Haddii Aad Dajis Ku Qaadato Synephrine
Haddii aad qaadatid qolka qallafsan ee ka badan inta lagu talinayo maalin kasta, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto waxyeelo xagga wadnaha ah sida wadnaha garaaca wadnaha, madax-dhiigfuranka, madax-xanuun, madax-wareer, iwm. Haddii aad ka badan tahay qolka synephrine, waxaa muhiim ah in aad raadsato daryeel caafimaad oo degdeg ah . Haddii kale, waxaad wici kartaa Khadka caawinta sunta 1-800-222-1222.
Gebogebada "Synephrine HCL"
Iyadoo laga filayo wax kasta oo sahlan oo kordhiya dheef-shiid kiimikaadka, faa'iidada muhiimka ah ee dheellitirka synephrine waa miisaanka si deg deg ah. Isku daridda cunto ku haboon iyo jimicsi joogto ah, synephrine ayaa kaa caawin kara inaad hesho jimicsi fiican oo ka fogow dhibaatooyinka culeyska la xiriira sida dhiig kar, wadno xanuun, iwm.